I-Hypersthene - iiminerali ezingenayo - i-Orthorhombic pyroxenes - Ividiyo
Thenga ihypersthene yendalo kwivenkile yethu
I-Hypersthene yinto eqhelekileyo evelisa amaminerali e-inosilicate yeqela le-orthorhombic pyroxenes. Ifomula yayo yekhemikhali (Mg, Fe) SiO3. Ifunyanwa kwiigneous kunye neetamorphic emadwaleni kunye nakwindawo enamatye kunye nesinyithi. Uninzi lwereferensi ulishiyile ngokusesikweni eli gama, bekhetha ukwahlula ngokwamaminerali njenge-enstatite okanye ferrosilite. Yenza uchungechunge lwesisombululo esiqinileyo kunye ne-enstatite kunye ne-ferrosilite, ngokuba lilungu eliphakathi phakathi kwezi zimbini. I-enstatite ecocekileyo ayinankcenkce, ngelixa i-ferrosillite emsulwa ayinayo i-magnesium. I-Hypersthene ligama elinikwe amaminerali xa inani elibalulekileyo lezinto zombini likho. Amakristali aphuhliswe ngokungafaniyo anqabile, amaminerali ahlala efunyanwa njengabantu abafakwe kwi-igneous rock orite kunye ne-hypersthene-andesite, eyakha ibalulekile.
Umbala uhlala ungwevu, nsundu, okanye luhlaza, kwaye i-luster idla ngokuba vitreous to pearly. I-pleochroism yomelele, ubunzima bayo yi-5-6, kwaye amandla adibeneyo ayi-3.4-3.9. Kumphezulu othile ubonakalisa ubhedu olubomvu oluxutywe nge-sheen, okanye i-schiller, enemvelaphi efanayo ne-bronzy sheen ye-bronzite, kodwa iphinyiselwe ngakumbi. Njengebronzite, ngamanye amaxesha iyasikwa kwaye ipolishwe njengelitye eliligugu.
Igama elithi hypersthene livela kwisiGrike kwaye lithetha ukomelela okungamandla, kwaye iyinxalenye yobunzima bayo kune-amphibole yezimbiwa ezinamaphondo, isimbiwa apho kuhlala kudidekile.
I-Hypersthene calms, i-soothes, imihlaba kwaye inefuthe lokuthoba. Kuluncedo kakhulu ngengqondo egqithisileyo, esikhusela kwi-hectic-ness yangaphandle kwibhombu ethambileyo nenekhuselo.
I-Hypersthene ikhuthaza indlela ehleleke ngakumbi ngendlela encomekayo kunye nengcinga, ukuze sifumane isisombululo kwiingxaki kunye neendlela eziluncedo zokuqhubela phambili.
Ngokuzola, ukubeka phantsi nokukhusela umntu ophetheyo iluncedo oluhle kakhulu lokucamngca nzulu kunye nokucamngca okunzulu kwangaphakathi. Kuyatshiwo ukuba kungakuthatha ukuthatha uhambo uye kolunye uhla kunye nezinye iindlela zesazi.